Ahoana ny fomba hanamboarako ny lesoka 0x80a4001a amin'ny Xbox iray? - Fahadisoana
Tena > Fahadisoana > Xbox error 0x80a4001a - vahaolana amin'ireo olana
Xbox error 0x80a4001a - vahaolana amin'ireo olana
Ahoana ny fomba hanamboarako ny lesoka 0x80a4001a amin'ny Xbox iray?
Fahadisoana 0x80a4001amiseho rehefa voatosika hanao ny teny miafinao ianao
Mandehana any amin'ny System> Settings> Account> Esory ny kaonty.
Safidio ny kaonty tianao esorina ary safidio ny Esory.
Safidio ny Login, ary ampio indray ny kaontinao ary ampidiro ny tenimiafinao.
Safidio na tsy misy sakana na angataho ny passkey.
Ahoana no hanamboarako ny lesoka 0x80a40019?
Atsaharo ny Xbox One anao hamerenana ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra. Jereo ny fomba famerenana amin'ny laoniny na familiana herinaratra ny console Xbox One anao. Raha manomboka indray ny console dia tsy izanytapa-kevitraizanyOLANA, miandry minitra vitsy dia manandrama miditra indray.
Ahoana ny fomba hanamboarako ny lesoka fanombohana amin'ny Xbox iray?
Raha hamerina ny console anao amin'nyXbox StartupTroubleshooter, safidio hamerina ityXbox. Rehefa voatosika dia safidio ny lalao Keep sy apps. Ity safidy ity dia hamerina ny OS ary hamafa ny angona mety simba rehetra nefa tsy hamafana ny lalao na ny fampiharana anao. Raha miasa izany dia tokony haverina amin'ny efijery Home ianao aorian'ny famerenan'ny console.
Ahoana no amahanao ny lesoka amin'ny fanavaozana Xbox?
Ireto misy fomba mahazatra ampiasainaamboary XboxIrayfanavaozana ny lesoka:
Kitapom-pahefanaXboxIray avy amin'ny efijery Something Went Wrong.
Zahao ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra.
Manandrama offlinevaovao farany.
Afaho ny toerana amin'ny kapila mafy ataonao.
Factory reset nyXboxIray.
Mifandraisa amin'ny Microsoft Support.